ब्यानर पोष्ट Archives - Babal Khabar
Jan32022 by बबाल खबरNo Comments
ब्यानर पोष्ट, रोचक
भिडियो हेर्नुस, सन् १९३३ नोभेम्बर २६ तारिखको कुरा हो जब खादी अथवा घरमा बुनिएको कपडा लगाएका एक व्यक्ति कलकत्ताको भिडभाडयुक्त हावडा रेलवे स्टेशनमा उभिरहेका युवा जमिनदार अमरेन्द्र चन्द्र पाण्डेयसँग ठोक्कि'एर अगाडि बढे। २० वर्षीय अमरेन्द्रलाई दु'ख्यो र केहीले घो'चे जस्तो महसुस भयो।लगभग चिच्याउँदै अमरेन्द्रले भनेः “कसैले मलाई केही चिजले घोचे'र गयो।”अमरेन्द्र आफ्ना केही आफन्तसँग पारिवारिक साम्राज्य रहेको पाकुड (अहिले झारखण्डमा पर्ने क्षेत्र) गइरहेका थिए। घ'टनापछि उनले आफ्नो यात्रा जारी राख्ने निर्णय गरे। तर केहीले घो'चे जस्तो थाहा भएपछि सँगै भएका आफन्तहरूले उनलाई कलकत्तामै बसी रगत परी'ण गराउन सुझाव दिए।त्यही बेला अचानक रेलवे स्टेशन आइपुगेका अमरेन्द्रभन्दा १० वर्ष जेठो उनका सौते'नी दाइ बेनोयेन्द्रले त्यसलाई सामान्य घटना भन्दै अघि बढ्न भने ! आठ दिनपछि मृ'त्यु, तीन दिनसम्म ज्वरोले च्याप...
भिडियो हेर्नुस, काठमाडौ । यदि तपाई जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अवसर खुलेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ।मन्त्रालयले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३६ कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्न लागेको हो। त्यसका लागि शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरिएको छ। १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ।मन्त्रालयले प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा नायक प्राविधि सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो। यो पनि पढ्नुहोस्‘विराटनगर । विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ११ पुसदेखि पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले दुई दिन पढाएर शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पढाइ रोकेको हो । एमबीबीएसमा भर्ना भएक...
साभार डिसी नेपाल, ऋषिराम कट्टेल। कोलम्बस/अमेरिका । अमेरिकाको मध्यपश्चिमी राज्य ओहायोमा भर्खरै जिएन इन्टरनेशनल ग्रोसरी खुलेको छ, निकै ठूलो, सम्भवत नेपालीभाषी कसैले पनि खोलेका छैनन् यति ठूलो। ओहायो राज्यको राजधानी कोलम्बस नजिकैको शहर पिकरिन्टनमा खुलेको यो स्टोर देख्ने जो कोहीले पनि पक्कै भन्छ अमेरिकामा पनि यति नेपाली सामानको स्टोर। त्यो नेपाली दैनिक उपभोग्य सामाग्री पाउने बडेमानको भवन देख्नेको मानसपटलमा आउला निकै ठूलै ब्यापारीले पैसा खन्याएछ। तर यो स्टोरमात्र हैन त्यो भव्य भवनका मालिक गोविन घिमिरेलाई देख्दा झस्किँदै तपाई भन्नु हुनेछ, ओहो यो फुच्चे यसको मालिक! हो, शरणार्थीको रुपमा १२ वर्ष अघि तेस्रो देशमा पुनर्वास आएका गोबिन घिमिरे त्यसका परिकल्पनाकार, हर्ताकर्ता र एक हिस्सेदार हुन्। पूर्बी नेपालको झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट २००९ मा अमेरिका आइपुगेका उनी सानै उमे...
Oct132021 by बबाल खबरNo Comments
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजमा कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक भएको छ । जाजरकोट जिल्ला कुशे गाउँपालिका–९ का ४७ वर्षीय भरतविक्रम शाहीको कलेजका चिकित्सकले अठार घण्टा लगाएर शाहीलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । कलेजद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटाले शाहीलाई उहाँकी धर्मपत्नी कमलादेवीले ६० प्रतिशत कलेजो प्रदान गर्नुभएको थियो । अस्पतालका विषेशज्ञ चिकित्सक सर्जन डा सञ्जयकुमार यादव, डा एकानन्द सिंह, डा जयन्तकुमार शाह, हेपाटोलोजी डा सागर पौडेल, डा वरुण श्रेष्ठ, एनेस्थेसिया डा किरण अधिकारी, डा नवीन यादव, डा सुरेश गौतम, डा वीरेन्द्र राउत, रेडियोलोजिष्ट डा दीपक अधिकारी, डा सुवास ओझासहितका टोली प्रत्यारोपणमा सहभागी हुनुहुन्थ्योे । प्रत्यारोपणमा भारतको एपोलो अस्पतालका विषेशज्ञ चिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक देवकोटाका अनुसा...
Sep252021 by बबाल खबरNo Comments
पुरा खबर, घरमा राखिएको हरेक एउटा चिजले शुभ र अशुभ प्रभाव पार्छ । यस्ता चिजले घरको माहौल निर्धारित गर्छ । वास्तुका अनुसार घरका केही वस्तुले सकारात्मक त केहीले नकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ । सकारात्मक उर्जा भएका वस्तु राख्दा घरमा सुख–समृद्धि आउँछ भने नका रात्मक ऊर्जा भएका वस्तुले हानी मात्रै गर्छ ।आउनुहोस्, यस्ता चिजबारे जानकारी लिऔं जसलाई राख्दा घरमा सधैं पैसाको अभाव हुनेगर्छ । पुराना पत्रिकाःधेरैजसो घरमा पुराना पत्रिका जम्मा भएर बसेका हुन्छन् । मानिसहरु आ–आफ्नो तरिकाले यी पत्रिका प्रयोग गर्ने गर्छन् । वास्तुका अनुसार यस्ता वस्तुले घरमा समस्या निम्त्याउने गर्छन् । पुराना पत्रिकामा धुलो–माटो जम्ने गर्छ र ओसिलो ठाउँमा राख्दा किरा जन्मिने हुर्कने डर पनि रहन्छ । एक तरिकाले यसले घरमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने गर्छ ।यदि तपाईंको पनि घरमा पुराना पत्रिका जम्मा गर्ने बानी छ भने छिटोभन्दा छ...
Sep232021 by बबाल खबरNo Comments
ब्यानर पोष्ट, रोचक, विचार
माथि follow गरेर मात्र पढनुहोला, आजभोली अफिस जान भने पछि हुरुक्कै हुन्छु। कहिले पुगुँ र त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा गएर थच्च बसुँ जस्तो लाग्छ। मानौं अचेल त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा आधुनिक चुम्बक छ ! अनि पो त्यसले मलाइ तानी रहन्छ। नत्र किन म अफिस भने पछि मरिहत्ते गरेर दौडन्छु त ? जति काम गरे पनि तलब भत्ता जस्ताको तस्तै ! तर पनि म भित्र भने अचेल अचम्मको जाँगर खुबै चलेर आँउछ। पहिले त अफिस भने पछि वाक्कदिक्क लाग्थ्यो। कहिले छुट्टी लिउँ ! कहिले बिदा पर्ला कहिले शनिबार आउला र आनन्दले बसुँला जस्तो लाग्थ्यो तर अचेल त शनिबार नै नआए नि हुन्थियो , कुनै दिन पनि बिदा नपरे हुन्थियो, हरेक दिन अफिस खुलोस र हरेक समय त्यो रिसेप्सनको कुर्सी नछोडु जस्तो ! लाग्छ हरेक समय त्यही कुर्सीमा बसिरहुँ बसिरहुँ त्यो कुर्सीमा बसे पछि कहिले रात नपरोस र कहिले अफिस बन्द नहोस। अचेल घरमा पनि आमाले खाना बनाउनु हुन्न।...
पहिले भिडियो हेर्नुस, एकपछि अर्काे गर्दै बिभिन्न आईपीओहरु आईरहेकै छन् । ओखलढुंगा र रामेछापको सीमा नदी लिखुमा निर्माणाधीन ५२.२ मेगावाट क्षमताको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाले ६२ करोड ५० लाखको सेयर निष्काशनको तयारी गरेको छ । यो मध्ये ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी रहने ५० प्रतिशत सर्वसाधारणले पाउने छन् । याे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारका लागि ठूलाे अवसर पनि हाे । ३१ करोड २५ लाख मूल्यको ३१ लाख २५ हजार कित्ता प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारी तथा ३१ लाख २५ हजार कित्ता शेयर सर्वधारणका लागि निस्काशन गर्न लागिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर ९ पोकली, खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । त्यस्तै रामेछापतर्फको गोकुल गंगा गाउँपालिका र लिखु ताम...
सवारी चालक अनुमति पत्रको मापद'ण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेको क'डा मापद' ण्ड परिमार्जन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। यो प्रस्ताव अनुसार कुनै सानो ग'ल्तीले ट्रा'यल फेल नहुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सेतोपाटी लाई जानकारी दिए। 'अहिले ट्रा'यल दिनेमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै पास हुन्छन्। राम्रोसँग सवारी साधन चलाउन जान्नेहरू पनि सामान्य ग'ल्तीमा फे'ल हुँदा बिचौ'लि याकहाँ जाने सम'स्या देखियो। त्यही भएर अलि सहज बनाउन यो काम गर्न लागिएको हो,' उनले भने। हमालका अनुसार नयाँ प्रस्तावमा ट्रायलका विभिन्न चरण अंकका आधारमा पास-फेल निधो गरिनेछ। ट्रायल सुरूवातकै 'एट (८)' मा छिरेदेखि ट्रा'यल पूरा गरेर ननिस्किउञ्जेल सम्म विभिन्न प्यारामिटरमा अंक बाँडिनेछ। यो ट्रा'यलको पूर्णाक १०० हुने र ६० आउनेहरू पास ...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अख'ण्ड'ताका निम्ति एकताको गाँ'ठो बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २२९ औं पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्या शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वरा'जाले यसको औचित्य हिजो, आज र भविष्य'मा पनि रहने जनाएका हुन् । उनले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने क्र ममा देशको आवश्यकता र जनताको चाहना हुँदा शा हवंशीय रा'जाहरुले सक्रिय भूमिका मात्र निर्वाह नगरी संवैधा'निक रा'जतन्त्र'को मर्या'दा अ'नुरुप व्यव'हार भएको समेत प्र'स्ट पारेका छन् । पूर्वराजा शाहले शाहवं शीय राजाहरुले राज'ग'द्दी त्या'ग्ने सम्मको उच्च सा'हस र इमा न्दा'री दर्शाएको स्मरण गर्दै आफुहरुको निम्ति देश र जनताको हि'त नै सर्वोपरी रहँदै आएको बताएका छन् । शुभकामना सन्देशमा शाहले भनेका छन्ः ‘हाम्रो विचारमा रा'जनीति भन्नु नै देशको सेवाको उच्चतम साधन ...